Bell Sanchar यशको ‘केजीएफ–२’को हिन्दी भर्सनले दुई दिनमै कमायो १०० करोड ! - Bell Sanchar
साउथका सुपरस्टार यश स्टारर् ‘केजीएफः च्याप्टर २’ले बक्स अफिसमा सुनामी नै ल्याएको छ । फिल्म रिलिज भएसँगै ठूलठूला बलिउड र साउथ फिल्महरुलाई पछि पारेको छ । फिल्मले फस्र्ट–डे ५४ करोडका साथमा बम्पर ओपनिङ गरेको थियो । त्यस्तै फिल्मले दोस्रो दिन पनि बक्स अफिसमा कमाल गरेको छ ।
यश र सञ्जय दत्तको ‘केजीएफ–२’ले दोस्रो साता पनि राम्रो कमाइ गर्दै, कुन दिन कति कमायो ?
वैवाहिक बन्धनमा बाँधिइन् अभिनेत्री केकी अधिकारी
नेपाली कथानक चलचित्र कैदीको–पत्रको फस्टलुक सार्वजनिक
एनिमल’मा परिणीतिको ठाउँमा रश्मिका, रणवीरसँग अनस्क्रीन रोमान्स गर्ने